Lokuqala nguqulo izinga sokubala
Lokuqala nguqulo izinga sokubala ikuvumela ukubala izinga lakho yibasal yokutya, oko kukuthi isixa lweekhalori ukuba umzimba wakho elivutha ngoxa kuphumla ku bume neutrally ephakathi.
Faka uvoto umzimba ukubala BMR
Isini: Indoda Imazi
Ubunzima: nekhilogram neekhilogram
Ngeesentimitha iinyawo / intshi
Izinga umzimba Lokuqala (okanye BMR) linani lweekhalori ubuya niyitshise ngosuku xa wena luyeke ukusebenza uze wahlala ebhedini imini yonke namandla yakho iya kusetyenziswa kuphela ukugcina amalungu yakho ebalulekileyo, ezibandakanya ingqondo, intliziyo, imiphunga, luvo, izihlunu kunye nezinye.
Weight calculator uakubala obukhulukazi onguwo womzimba kunye siseko: yi ngokomlinganiselo Quetelet, Brock, Solovyov index. Calorie inani.
BMI calculator ifomula
Bala umzimba index ubunzima ngenxa yamadoda nabafazi kuxhomekeke ukususela kubudala wakho nemilo umzimba.
Imilo Body sokubala
Bala imilo wakho umzimba nohlobo lomzimba, ubunzima bakho ofanelekileyo, kwamafutha omzimba kunye nomzimba ipesenti nenqatha, inqanaba ukutya kunye nezinye.